I-International Virtual Cadastral Symposium - Geofumed
NgoJulayi, 2012 cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS, UkuCwangciswa kweziThili
Ngenkxaso-mali yoMbutho wabaGcisa kwi-Peru kunye ne-UNIGIS, i-Geowebss ihambisa intethoImeko yangoku ye-cadastre kunye neendlela zekhompyutheni kunye ne-telematics zokuvuselela«, Eya kwenzeka ngolwesiHlanu we10 nangoMgqibelo 11 ka-Agasti ka-2012. Umnyhadala wobuso ngobuso uza kubanjelwa ePeru kodwa abasebenzisi abavela kwihlabathi liphela banakho ukuthatha inxaxheba phantse.
Siyicinga ukuba liyilinyathelo elihle kakhulu, elixhomekeke kwixesha elifanelekileyo iPeru eliye lahlala kwiminyaka yakutshanje kwi-geospatial issue. Amazwe amaninzi aseLatin America aneenkqubo ezifanayo, kodwa ukuzinza kwabo kudla ngokukhawulelana nokulingana okuncane kunye nentsebenziswano ebandakanya iinkampani ezizimeleyo kunye namaziko karhulumente kunye nezemfundo.
Ukukwabelana ngamava ngamazwe isicwangciso esihle kakhulu sokuphucula oko unakho kwaye ufunde oko abanye abaye bafezekileyo kwaye yile enye yeenjongo zalo mcimbi.
I-ajenda iquka iintsuku ezimbini ezibalulekileyo, apho kufanelekile ukuba zibandakanyeke kwiofisi okanye kwikhaya ngeqonga elipheleleyo:
NgoLwesihlanu, iimviwo zendawo zifakiwe, kwisakhelo sesimanje esakhuthazwa ngu rhu lumente wasePeru ngokusebenzisa uMthetho woMgaqo-siseko weSizwe soNxibelelwano lweSizwe soLuntu lweSizwe. Ukuqhubela phambili kwezobuchwepheshe kunye nezikhululo zokulandelela ngokusisigxina ziya kunikwa.
Emva kwesidlo sasemini, amava aseHonduras aya kuboniswa ngokuphunyezwa ngokuthe ngcembe kwimiba emininzi ye-cadastre yokuphuhliswa koomasipala.
08: 30 - 10: 00 Ingxelo yokuNcedisa kwi-Platform yeNgqungquthela yevidiyo
10: 00 - 10: 10 Ukuvulwa kweSiganeko
UMlawuli weKholeji yeGeographers yasePeru
10: 10 - 10: 50 I-Cadastre kaMasipala ka-Today kwi-PERU.
Kuye kwakhiwa imodeli yanamhlanje yokuqulunqwa, ulawulo kunye nokulawulwa kolwazi - iDadastre yeDigastre
UDavid Albujar Almestar
Umphathi ophantsi weCastastre - UMasipala waseM Miraflores
Ummeli we-AMPE (uMasipala wooMasipala basePeru)
10: 50 - 11: 20 I-Cadastre eninzi phantsi koMthetho 28294-SNCP-Peru
UNobhala Wezobuchwephesha be-SNCP - uMlawuli we-Exad we-Cadastre
11: 20 - 11: 40 Ukuphuka kweKafesi
11: 40 - 12: 20 Ubuchwepheshe beenkcukacha (IT) kwinkonzo yeCadastre ePeru
12: 20 - 13: 00 I-Satellite Geodesy ePeru (iipetroli zokulandelela ngonaphakade)
InguRuddy Reza. - RTK Solutions
13: 00 - 14: 30 LUNKULU
14: 30 - 15: 10 Ukusetyenziswa kwesiGqibo seCadastre eMinicipal for Development Development
UMququzeleli weNkqubo yoQinisekiso kaMasipala eHonduras
15: 10 - 15: 20 Imibuzo Yevili
UMoisés Poyatos, uza kufaka amava kunye nobuchule ngokusebenzisa imifanekiso eqhotyoshelweyo, esekelwe kwimeko yeHonduran yeprojekthi ye-PROCORREDOR. Sazi ngaphambili ngoMoses ngomxholo we gvSIG kumasipala baseGuatemala.
Kwaye kukho amava asePeruvia / aseItali ekuphatheni imifanekiso ye-satellite; I-Lincoln Institute iya kubonisa isihloko sokulinganisela kunye nerhafu yepropati kumava ase-Uruguay kunye neBolivia malunga nenkqubo yokucwangcisa ukuqiniswa koomasipala.
Kwakhona kunomdla, ukuhanjiswa kukaRafael Beltrán, kunye Project MuNet eqhube i-OAS kumasipala abaninzi baseLatin America kwintsebenzo equlethelene ne-ESRI, i-Trimble ne-Stewart Solutions.
Kwaye, ekugqibeleni, i-UNIGIS iya kuchaza indlela inkqubo yokubhengezwa ngayo isebenza kwimihlaba yeeNdawo zeNgcaciso.
9: 20 - 10: 20 Ulawulo lwabathathi-nxaxheba
10: 20 - 11: 00 Ulawulo loMhlaba, iCadastral Survey ne-Orthophoto
Iingcali kwi-GIS kunye noCwangciso loThutho
11: 00 - 11: 40 Izithombe zeSatellite
11: 40 - 12: 10 I-Cadastre, i-Cadastral Valuation kunye neRhafu yePropati - i-Uruguay
UNjingalwazi kwi-Lincoln Institute of Land Policy
12: 10 - 13: 00 Lucebise imisebenzi, yokuphatha kunye nezobugcisa ekuncedeni nasekuqiniseni umasipala waseBolivia
13: 00 - 14: 20 Ukuphuka kweKafesi
14: 20 - 15: 00 Oomasipala abaSebenzayo nabanokuPhepha, uMasipala waseMnet Cadastre - Umbutho weMerika States -OEA
URafael J. Beltrán Ramallo
15: 00 - 15: 40 UNIGIS kwiLatin America, iNgcaciso kwiNkqubo zoLwazi lweNdawo
Ummeli we-UNIGIS waseLatin America
15: 40 - 15: 50 KUVALWA
Unokuphinda ulandele umcimbi Facebook kunye ne-LinkedIn
Post edlulileyo«Edlulileyo Ikhosi ye ArcGIS isicelo Mineral Exploration
Post Next Ucando PC Ipaq kunye Semiestaciones ne Total ipetroliOkulandelayo "